Soso-kevitra momba ny fampiasana sary, alim-bolana sy fanoritsoritana mba hampiroboroboanao ny Business Online
Raha ny momba ny famoahana ny tranonkala, ny lanjan'ny sary dia tsy azo sakanana. Ny famoahana fanentanana ety anaty aterineto, ny minitra vitsy amin'ny fotoana misy anao dia mety hitondra mpitsidika tena anao ary haka ny fiheveran'ny mpamaky anao manontolo. Ny fampidirana sary sarobidy ho an'ny votoatinao dia mitana anjara toerana manan-danja amin'ny fanatsarana ny fahazoana sy ny traikefan'ny mpampiasa anao. WordPress dia manome ny mpamoaka tranonkala fahafahana hampiditra sary mahafinaritra amin'ny votoatiny. Ankoatra izany, ny fampihetseham-po ny mpihaino anao amin'ny alalan'ny fampiasana ny famaritana metadata, ny lohateny sy ny sary dia tena manan-danja indrindra amin'ny famoahana ny tranonkala. Eto i Jason Adler, Semalt Manager Success Manager, dia manasa anao hijery ireto karazana WordPress manaraka ireto:
Raha ny momba ny famoahana ny tranonkala, ny sary dia matetika miseho eo ambanin'ny sary. Na izany aza, ny fametrahana sary iray dia miankina amin'ny loha-teny ampiasain'ny mpitory iray. Ny sary tsirairay noforonina dia miteraka fanazavana manokana izay tokony ho samy hafa amin'ny hafa. Rehefa tonga amin'ny WordPress, dia ampidirina amin'ny alalan'ny fampiasana fohy ny soratra. Ny fampisehoana sary miaraka amin'ny sary ao amin'ny editor-editor dia somary mihozongozona. Mba hampidirana ireo lohateny, dia tsy maintsy manao izany ianao avy amin'ny code embed. Ny lanjan'ny fanoratana dia tsy azo odian-tsy hita raha ny momba ny famoahana ny tranonkala. Marihina fa afaka mampiasa rohy HTML ianao amin'ny tenifototra WordPress izay tena manan-danja tokoa.
Lohateny iray dia mitana anjara toerana lehibe ao amin'ny
Misaotra ireo mpandika teny ao amin'ny tranonkala.
Ny Alt Text dia tsipiriany fanampiny izay tsy dia ampiasaina intsony amin'ny tranonkala. Ny Alt Attribut dia tsy tokony hampiasaina amin'ny resaka marketing. Text Alt dia ny antsipirihan'ny attachment izay miseho rehefa tsy mety misokatra ny sary. Ireto ny fitsipika mifehy ny fampiasana ny Alt Text amin'ny WordPress. Raha toa ka apetraka amin'ny sary ny sary, dia havaozina ny mari-tsilin'ny sary. Raha ampifandraisina amin'ny tanjona mifanerasera ny sary, ny Alt Text dia tokony hamaritra tanteraka ny votoaty navoakan'ny mpitory iray.
Raha toa ka misy rohy iray ao anaty rohy iray, ny Alt Attribute dia tokony mamaritra ny rohy hoe Description ho mpitantana; Ny famaritana dia ny singa izay tokony tsy hohadinoinao na oviana na oviana. Raha ny iray amin'ireo mpitsidika mety aminao no hikirakira ny pejy mailaka, dia tokony ho hitan'ny mpitsidika ny filazanao lava sy ny foto-kevitrao. Ny mpampiasa mampiasa ny famaritana dia afaka mampiasa ny format HTML ary mamolavola ny lahatsorany mba hahitana fiovana mora. Ny fiantraikan'ny metadata amin'ny alàlan'ny tranonkala Alt Attributes, fanoritsoritana, famaritana, ary lohateny dia endri-javatra izay tsy ampoizin'ny mpiserasera. Ny Metadata dia manatsara ny fomba fijerinao amin'ny aterineto, mampitombo ny traikefa anananao, ary manatsara ny fifampiraharahana. Ohatra, ny fampidirana sary iray ao amin'ny Google dia ahafahanao miditra ambony amin'ny algorithm. Ho setrin'izany, ireo mpitsidika eo an-toerana dia afaka manampy amin'ny orinasanao amim-pahombiazana. Ny fahatakarana ny maha-zava-dehibe ny antsipirihan'ny angona sy ny fomba ampiasain'i WordPress metadata sy ny lohateny dia fepetra ilaina. Ny antsipirihan'ny fametahana ihany koa dia tsy niraharaha sy nampiasaina raha ny momba ny famoahana ny tranonkala Source . Ampiasao ny toetra, ny metadata, ny lohateny ary ny filazalazana tsara ny sariohatrao mba hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa